Libanona: Lahatsoratra Noraisina Tsy Ankifidy Nandritra Ny Fialantsasatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Septambra 2018 15:27 GMT
Tao anatin'ny fialantsasatra i Libanona tamin'iny herinandro lasa iny. Nifanandrify ny andro telo tsy fiasana. Ity taona ity no iray amin'ireo taona vitsy ifanandrifian'ny fanisanandro litorjika ho an'ireo kristianina ortodoksa sy ny kristianina katolika. Noho io antony, niara-nankalaza ny fetin'ny Paska avokoa ireo vondrom-piarahamonina kristianina libaney rehetra. Tamin'ny herinandro lasa ihany koa no nankalazana ny tsingerintaona nahaterahan'ny mpaminany Mahomet. Nankalaza izany avokoa ireo vondrom-piarahamonina miozolomana Libaney. Io no mety antony nahatonga an'ireo blaogera Libaney, amin'ny ankapobeny, nitsahatra kely aloha. Na izany aza, ireto manaraka ireto dia safidy amin'ireo lahatsoratra vitsivitsy tamin'ny herinandro lasa. Mirary fety sambatra ho an'ny rehetra.
Ndeha hatombotsika aminà sariitatra vitsivitsy. Ary ireo mpiaramiasa amin'ny governemanta sy ny mpanohitra samy nampiasa ny fanentanana “Tiako ny Fiainana”. Ao anatin'io sariitatra io, miangavy fotsiny amin'ireo “mpanaraka ny Tiako ny Fiainana” i Amal mba “hitady zavatra hatao”. Mampiasa an’io sariitatra io ihany koa i Shirin mba hanehoany ny heviny mikasika an'ireo hery politika sy ireo fanelanelanana ivelany izay hinoany hisy fiantraikany ao Libanona.
Mamaly amin'ny antson'ny gazety Libaney An-Nahar ny blaogy Ireo Jiosy ao Libanona izay mangataka, na iza na iza jiosy Libaney ka liana, ao Libanona na any ivelany, mba hiresaka ny traikefan'izy ireo mikasika an'i Libanona sy ny fiainan'izy ireo.
Tranga iray tsy nisy toa azy io amin'ny fanampiana ary iray izay irianay ho ampiasaina manontolo. Raha liana ianao ny handray anjara amin'ny tetikasa [ny Fandriampahalemana?], sy tena hanampy hitondra hazavana mikasika an'ireo toe-javatra mahatsiravina izay natrehan'ireo jiosy tao Libanona ary sy mbola mitohy atrehany, ary hanampy hanafaingana ny tolona mendrika voizin'io tetikasa io mitombo eny anatin'ireo media Libaney mahazatra sy ny fiarahamonina, azafady indrindra mifandraisa aminay avy hatrany.
Ny fitsidihan'ny mpandahateny Nancy Pelosit ao Libanona dia niteraka ity fanehoankevitra manaraka ity avy amin'ny Dr. Marcy Newman:
Raha toa i Pelosi, Lantos ary ireo mpitondra parlemantera hafa nitsangatsangana tao anatin'ny delegasiona nisy azy naniry hahafantatra ny dikan'ny fandriampahalemana amin'ireo antoko rehetra, dia tokony nandany ny fotoanany tany Libanona nihaona tamin'ireo niharan'ny vokatry ny adin'i Isiraely ry zareo ; mety ho afaka nitsidika an'ireo faritra nopotehan'i Isiraely ihany koa izy ireo araka izany. Mety ho nihaona tamin'ireo fianakaviana Libaney nianjeran'ireo baomba namboarin'ireo Amerikana ihany koa izy. Karazana fivoriana sahala amin'izany no mety hanampy an'i Pelosi hamaly ny tatitra ao amin'ny biraon'ny departemantam-panjakana, izay mitanisa fa efa nohosihosen'i Isiraely ireo fifanekena ara-dalàna nosoniavina niaraka tamin'i ETAZONIA tany amin'ireo andian-taona 70, rehefa nanjera baomba Amerikana 2,6 hatramin'ny 4 tapitrisa izy tao Libanona tamin'ny fahavaratra lasa teo, tao anatin'ireo 72 ora farany tamin'ny ady, nefa ny fifanekena ny fampitsaharana ady efa voasonia.
Manana lahatsoratra telo Ramatoa Levantine izay famelabelarana nasehon'i Dr Rami Zurayk, mpampianatra amn'ny Fintantanana ny Tontolo Iainana, Fakiolten'ny Siansa momba ny Fambolena sy ny Sakafo ao amin'ny Anjerimanontolo Amerikana ao Beyrouth, mitondra ny lohateny hoe: ny “Hakiviana amin'ny Fampandrosoana” (Fizarana voalohany, Fizarana faharoa, Fizarana fahatelo) (amin'ny teny anglisy) , tao anatin'ny fehinteniny, milaza ny mpandahateny hoe:
Haintsika eto Libanona ny fahatsiarovantena mitovy amin'ìzay niainan'ireo mpikatroka hafa tao Seattle, Rio, Dakar, ary Bangkok taorian'ny hakivian'izy ireo niaraka tamin'ny fampiroboroboana ny fikambanana orinasa. Mila jerena amin'ny fomba miabo izy io raha toa te-hampiasa azy ho toy ny fitaovana manainga ny fanovàna. […] mila miverina mandinika ny traikefantsika isika, ary mandrafitra ny paikady vaovao antsika, amin'ny alalan'ny fiarahana miasa amin'ireo mpikatroka izay misaina toa antsika manerantany. Tokony hiady amin'ny hakiviana isika miaraka amin'ny asa fa tsy miaraka amin'ny fahaverezam-panantenana.
Maneho ny ahiahiny i Abu Kais mikasika ny olana amin'ireo fikasan'ny filohan'ny parlemantera Libaney, Nabih Berri, rehefa nitaky izy ny hamiantsoan'ny mpitarika Saodiana fivoriana fikanandoha ho an'ireo mpitarika politika mpifanandrina ao Libanona.
Sahala amin'ny toa nivoaka tamin'ny fombany i Berri mba hambolena fisarahana eo amin'ireo Saodiana sy ny March 14 – andraikitra iray mifanaraka amin'ny satany maha-mpanelanelana azy amin'ny fitondrana Assad sy ny fanjakan'i Saoud. Tamin'ny fanakisahana an'ireo tafatafa hiala an'i Beyrouth ho ao Riyadh, manantena ny hampihitsoka ny March 14 i Berri ary hanao izay hanehoana zy ireo ho toy ny tsy tia Saodiana.
Ary farany avy amin'i Layal, ny fanazavana avy amin'ny manam-pahaizana iray momba ny antony maha-zavadoza kokoa ho an'ireo ankizy madinika an'ireo lahatsarin-kira navoaka teo amin'ny fahitalavitra noho ireo sary vetaveta afaka jerena ao amin'ny aterineto.
Nandritra ny fivoriana, niteny ny reny iray fa indray andro ny zanany lahy niresaka taminy mikasika ny namany izay nampiseho azy sarimihetsika vetaveta tamin'ny aterineto, sy ny tahotra nanenika azy, ary dia niafina tao ambany latabatra izy. Nilaza ny dokotera fa fihetsika ara-dalana izany ho an'ny ankizikely mitovy taona aminy (9-12) izay tsy mbola nahalala mihitsy ny fampianarana ny resaka fananahana sahaza azy. Izay nasian'ny Dokotera fanamafisana dia ireo lahatsarin-kira maoderina. Nilaza izy fa zava-doza kokoa ireo lahatsarin-kira satria: […]
Eo ampiandrasana ny herinandro manaraka, mirary fahasalamàna ho anao.
Fanadihadiana Tranga 29 Desambra 2021